Fahasamihafana eo amin'ny asidra sy ny fotony | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny asidra sy ny fotony | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / simia / fahasamihafana eo amin'ny asidra sy ny fotony
Fahasamihafana eo amin'ny asidra sy ny fotony
27 Jona 2011 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny asidra sy ny fotony dia ny asidra manana sanda pH manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 fa ny bases kosa dia manana sanda pH manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 14.
Ny sanda pH dia ny logaritma miiba amin'ny fifantohana H + ion . Ny pH 7 dia heverina ho ny pH tsy miandany. Ny sanda pH ambony noho ny 7 dia manondro ny fisian'ny fotony raha ny sanda ambanin'ny 7 kosa dia manondro ny fisian'ny asidra. Araka ny teôria Brønsted-Lowry, ny asidra dia afaka mamoaka ion H + raha toa kosa ka afaka manaiky ion H + ny fotony.
2. Inona no atao hoe Asidra?
3. Inona no atao hoe Base
4. Fampitahana mifanila - Acid vs Base amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe Asidra?
Ny asidra dia akora manana pH latsaky ny 7 amin'ny vahaolana aqueous. Ny fisian'ny medium misy asidra dia azo faritana amin'ny alàlan'ny taratasy litmus. Ny asidra dia afaka mivadika mena mena. Na izany aza tsy misy fiovana ny loko raha ampiasaina ny mena mena. Matetika asidra ny fitambarana manana atomika mora hidiran'ny hydrogène.
Araka ny teôria Brønsted-Lowry, ny asidra dia singa iray afaka mamoaka proton (H + ions) mankany amin'ny mpanelanelana rehefa ao anaty medium aqueous. Rehefa mivoaka ny H + ion, ireo ion ireo dia tsy afaka misy irery amin'ny medium aqueous. Noho izany ireto ion ireto dia mitambatra amin'ny molekiola rano, mamorona ion H 3 O + ( ion hidronium ). Ny fisian'ny ionôna hydronium, araka izany, dia manondro ny fisian'ny asidra.
Araka ny teoria Arrhenius, ny asidra dia singa iray izay afaka mampitombo ny habetsahan'ny ion hydronium amin'ny medium aqueous. Izany dia mitranga noho ny fitomboan'ny ion + H. Raha atao teny hafa, ny asidra dia mamoaka ny ion + H, izay afaka mifanerasera amin'ny molekiola ao anaty rano hamorona iôna hydronium.
Rehefa mandinika ny teôria Lewis, ny asidra dia fitambarana iray izay afaka manaiky elektronika iray avy amina fatorana simika covalent . Miorina amin'ity famaritana ity, ireo zavatra tsy manana atôma hidrôzenina dia sokajina ho asidra koa noho ny fahafahany mandray ny mpivady elektronika.
Matetika ny asidra dia manana tsiro marikivy. Ny pH ny asidra iray dia latsaky ny 7. Ny ankamaroan'ny asidra rehetra dia manana fofona maimbo. Miraikitra ny firafitry ny asidra fa tsy malama. Ankoatr'izay, ny asidra dia afaka mihetsika amin'ny metaly (na metaly tena tsy mihetsika aza) hamorona hydrida vy sy gazy hidrogen.
Inona no atao hoe Base?
Ny base dia singa iray izay mampiseho sanda pH ambony noho ny 7 rehefa ao anaty vahaolana aqueous izy io. Ny fototry ny vahaolana dia miteraka loko manga ny lokon'ny litma mena. Noho izany, ny fisian'ny fotony dia azo faritana amin'ny fampiasana litmus mena. Na izany aza, rehefa ampiasaina ny litma manga dia tsy misy fiovana loko miaraka amin'ny fotony. Ny fitambarana manana vondrona hydroxyl mora simika dia matetika no fotony.
Araka ny teôria Brønsted-Lowry, ny base dia mpandray proton; raha atao teny hafa, ny base dia afaka manaiky proton avy amin'ny medium aqueous. Na izany aza, ny teoria Arrhenius dia manome famaritana mitovy amin'izany ihany koa: ny base dia singa iray mampihena ny habetsahan'ny ion hydronium misy amin'ny mpanelanelana iray. Ny fihenan'ny ion hidronium dia nihena satria ny fotony dia mahazo ion i + H na proton avy amin'ny mpanelanelana aqueous. Iôna ireto ion ireto dia takiana amin'ny famoronana iôna hydronium.
Sary 1: Fampitahana ny asidra sy ny base
Rehefa mandinika ny teôria Lewis, ny base dia singa iray afaka manome tsiroaroa elektronika. Ireo akora ireo dia manome tsiroaroa elektronika ary mamorona fatorana kojakoja . Araka io teôria io, ny ankamaroan'ny fitambarana izay tsy misy vondrona OH- dia lasa fototra.
Bases dia manana tsiro mangidy. Ireo akora ireo dia mampiseho foana ny soatoavin'ny pH avo kokoa noho ny 7. Saika tsy misy fofona avokoa ireo fotony, ankoatry ny amoniaka. Amoniaka dia manana fofona manitra. Tsy toy ny asidra, mahatsiaro malama ny fotony. Ny fototr'aretina dia lasa tsy voatanisa rehefa misy asidra.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny asidra sy ny fotony?
Asidra vs Base
Ny asidra dia singa iray izay mampiseho ny lanjan'ny pH ambany noho ny 7 rehefa ao anaty vahaolana aqueous izy io Ny base dia singa iray izay mampiseho ny sandan'ny pH ambony noho ny 7 rehefa ao anaty vahaolana aqueous izy io
Famaritana mifototra amin'ny Teoria Brønsted-Lowry
Ny asidra dia singa iray afaka mamoaka proton (ion H +) mankany amin'ny mpanelanelana rehefa ao anaty medium aqueous. Ny base dia mpandray proton; raha atao teny hafa, ny base dia afaka manaiky proton avy amin'ny medium aqueous.
Famaritana mifototra amin'ny Teoria Arrhenius
Ny asidra dia singa iray izay afaka mampitombo ny habetsahan'ny ion hydronium amin'ny medium aqueous. Ny fotony dia singa iray afaka mampihena ny habetsahan'ny ion hydronium amin'ny medium aqueous.
Famaritana mifototra amin'ny Teoria Lewis
Ny asidra dia fitambarana iray izay afaka mandray elektronika roa avy amin'ny fatorana simika covalent. Ny base dia singa iray afaka manome tsiroaroa elektronika.
Fiovan'ny loko ao amin'ny Litmus
Ny asidra dia afaka mamadika mena litmus manga, saingy tsy misy fiovana loko amin'ny litma mena. Ny fotony dia afaka mamadika manga mena mena, fa tsy misy fiovana loko amin'ny litma manga.
Manana tsiro marikivy ny fanampiana. Bases dia manana tsiro mangidy.
Ny asidra dia manana fofona maimbo. Tsy misy fofona ireo fotony, afa-tsy ny amoniaka.
Ny asidra dia mety mamorona iônona hydronium rehefa voahosotra. Ireo fotony dia afaka mamorona ion hidroksilana rehefa voarindra.
Karazan-javamaniry simika mifangaro
Ny karazam-borona asidra iray dia ny fotony mifangaro. Ny karazam-borona mifangaro amin'ny fotony dia ny asidra mpampifangaro azy.
Ny asidra iray dia azo atsangana amin'ny alàlan'ny fotony. Ny base dia azo atsimbadika amin'ny fampiasana asidra.
Ny asidra dia titrate amin'ny fotony ho an'ny fanamafisana. Ny fotony dia misy valiny amin'ny asidra ho an'ny fanamafisana.
Famintinana - asidra vs Base
Ny fitambarana rehetra dia azo sokajiana ho asidra, fotony ary fitambarana tsy miandany. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny asidra sy ny fotony dia ny asidra manana sanda pH manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 fa ny bases kosa dia manana sanda pH manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 14.
1. Helmenstine, Anne Marie. "Ity misy asidra iray amin'ny simia." ThoughtCo, Azo zahana eto .
2. Helmenstine, Anne Marie. "Famaritana asidra fototra sy fotony." ThoughtCo, Azo zahana eto.
3. Boky fitehirizam-boky. “Topy maso momba ny asidra sy ny potika.” Chemistry LibreTexts, tranomboky, 13 feb 2017, Azo zahana eto .
1. “Asidra 215 sy ifotony-01” Nosoratan'i OpenStax College - Anatomy & Physiology, tranokala Connexions , 19 Jun 2013 (CC BY 3.0) tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny asidra sy asidra Fahasamihafana eo amin'ny volomparasy Bromocresol Blue sy Bromocresol Fahasamihafana eo amin'ny fitambarana sy ny fifangaroana Fahasamihafana eo amin'ny singa sy ny fitambarana Fahasamihafana eo amin'ny iode sy iodide
Under Filed: Simia Tagged amin'ny: Acid , Misy asidra , Misy asidra vahaolana , asidra , amine , alkaline vahaolana , alkalinity , alkalis , fototra , faladiany , zavatra simika , pH sarobidy , sira
Fahasamihafana eo amin'i Ham sy Pork
Fahasamihafana eo amin'ny Lenovo IdeaPad Tablet K1 sy Thinkpad Tablet
Fahasamihafana eo amin'ny politika sy ny paikady
Fahasamihafana eo amin'ny asidra mimari-droa sy asidra polyatomika
Fahasamihafana eo amin'ny transduction ankapobeny sy manokana